Magic Candy 7.7.3957 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 7.7.3957 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား ပံုမွန္ Magic Candy
Magic Candy ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
မှော် Candy တစ် Delicious ချိုမြိန်ပွဲစဉ်3ပေါ့ပေါ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအံ့ဖွယ်အံ့သြဖွယ်သကြားလုံးကမ်ဘာပျေါတှငျ, ချယ်ရီပဲ, Peppermint, Banana နှလုံး, အပြာရောင် Bonbon နှင့်ဗိုင် Candy နေရာတိုင်းဖြစ်ကြသည်။
ပေါ့ပေါ့ပွဲစဉ်3ဂိမ်းရဲ့ပျော်စရာကျွမ်းကျင်ဖို့ Swap, အားပွတ်ဆွဲခြင်းနှင့် MATCH3သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအတူတူပင်ကပ်လျက်မှော်သကြားလုံး။ ချိုမြိန်အောင်ပွဲဤထိပ်တန်းကို Magic Candy ပရဒိသုနှင့်ပွဲစဉ်မှလွတ်မြောက်ရန် !!
ကို Magic Candy Key ကိုမှော် ကရှင်းလင်းပြောပြ
✿ကိုစှဲနဲ့တွန်းလှန်ပွဲစဉ်3ဂိမ်း
✿ Unlock appetizing နှင့်ကြည်နူးဖွယ်သကြားလုံးမြေပုံ: ချိုမြိန်ချိုင့်, ချောကလက်အိမ်တွင်းနှင့် Sugarshell Bakery
✿ 144 သကြားလုံးအဆင့်ဆင့် perplexing နှင့်စိတ်ရှုပ်စေသော
✿ Charm နှင့်အရသာသကြားလုံး
စိန်ခေါ်မှုများပေမယ့်ပျော်စရာအတားအဆီး✿: သစ်သီးကိတ်မုန့်, ​​Lollipop စသည်တို့ကို
✿အာရုံစူးစိုက်မှု: ကို Magic Candy အရသာရှိတဲ့သကြားလုံးအဘို့အပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင် Play!
✿ရရှိနိုင် LEADERBOARD: Play နှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်
တစ်အရသာကြွင်းသောအရာရှိသည်။ NOW ကအံ့သြဖွယ်ညှို့နှင့်ပြည့်စုံကြောက်မက်ဘွယ်ကို Magic Candy Play !!
Magic Candy အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Magic Candy အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Magic Candy အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Magic Candy အား အခ်က္ျပပါ
vivo-api စတိုး 7.85k 6.81M
Magic Candy ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Magic Candy အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 7.7.3957
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://sites.google.com/site/gamoperprivacypolicy/
App Name: Magic Candy
Release date: 2019-07-12 18:18:57
လက်မှတ် SHA1: E7:B3:27:EB:09:E6:2B:92:B6:15:9F:92:3D:8A:59:39:B3:4A:9D:41
ထုတ်လုပ်သူ (CN): magiccandy
Magic Candy APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ